छवि ओझा भन्छन्- रेखाले बच्चा पाउन मान्दै मानिनन् | EuropeNepal.Net
छवि ओझा भन्छन्- रेखाले बच्चा पाउन मान्दै मानिनन्
पाँच दाजुभाइ र तीन दिदीबहिनीमा सबैभन्दा कान्छो हुँ म । ०१८ सालमा मेरो परिवार धनकुटाबाट बसाइँ सरेर धरान झर्‍यो । ०२१ सालमा धरानको चतरालाइनम...
पाँच दाजुभाइ र तीन दिदीबहिनीमा सबैभन्दा कान्छो हुँ म । ०१८ सालमा मेरो परिवार धनकुटाबाट बसाइँ सरेर धरान झर्‍यो । ०२१ सालमा धरानको चतरालाइनमा म जन्मिएँ । बुबा खेती गर्नुहुन्थ्यो । धरान पब्लिक स्कुलबाट एसएलसी र महेन्द्र क्याम्पसबाट आइकम पास गरेँ ।
Five brothers and three sisters, I am the youngest. 018 BS, my family moved toacomplaint Dharan smoothly. I am trying to BS 021 ITAHARI Dharan. Father farming communicate. SLC and Mahendra Campus Public School Dharan aikama around him.
रेखा थापालाई बिहे गर्नुअघि गीताञ्जलीपट्टकिो छोरा मसँगै थियो । रेखाकै लागि छोरा सेक्रिफाइस गरेँ । भोलिका दिनमा रेखालाई डिस्टर्ब नहोस् र उसलाई पनि आमाको कमी होला भनेर गीताञ्जलीकी दिदीलाई धर्मपुत्र बनाउन दिएँ । चारखाल अड्डामा लगेर पास नै गरिदिएँ । अनि मात्र रेखालाई बिहे गरेको हुँ ।
बिहेलगत्तै रेखालाई एउटा बच्चा जन्माऔँ भनेको थिएँ । तिमीसँगै बच्चा पनि हुर्कँदै जान्छ, पछि तिमीलाई टेन्सन पनि हुँदैन भनेर सम्झाएँ, तर मानिनन् । धेरैपटक छलफल भयो, उनले मान्दै मानिनन् ।
रेखाकी आमाले पनि ‘तँ छविसँगै बस्ने हो भने अब बच्चा पाए भइहाल्यो नि भनेर सम्झाउनुभयो । ‘मेरी छोरी तगडा भई, पैसा कमाउन थाली, पछि यो सबै छविका छोराहरूले खान्छन् भन्ने सोचेर उनले छोरीलाई बच्चा पाऊ भनेकी हुन् । तर, रेखाले इच्छा नै देखाइनन् ।
उनले इच्छा नदेखाएपछि मैले उतिवेलै भनेको थिएँ, ५० वर्षको भएपछि म बच्चाचाहिँ पाउँदिनँ । नाति-नातिना खेलाउने उमेरमा बच्चा जन्माउने रहर मलाई आएन पनि । तीन वर्षपछि नै बच्चा जन्माएको भए आज १० वर्षको भइसक्थ्यो । म त बूढो हुने थिइनँ नि । बच्चा जन्माएपछि मैले पाल्नुपर्‍यो, हुर्काउनु पनि पर्‍यो ! तैपनि रेखाले मसँग बच्चा जन्माऔँ भनेकै छैन त मैले कहाँबाट जन्माउनू ?
छुट्टएिपछि आरोप लगाउन मात्रै ‘छविले मलाई बच्चा दिएनन् भनेकी हुन् । पब्लिकको सहानुभूति पाउन मात्रै उनले मेरो दोष देखाएकी हुन् । तर, म रेखालाई कुनै आरोप लगाउँदिनँ ।
रेखालाई मसँग बस्छु भन्ने लागेकै थिएनजस्तो लाग्छ अहिले । छविसँग लङलास्टिङ बस्छु भन्ने उनलाई लागेको हुँदो हो त सुरुमै बच्चा जन्माउँथिन् । मसँग अंश माग्थिन् । कुनै पनि नारीलाई बच्चा पाउने रहर हुन्छ, तर रेखाले त्यस्तो रहर मसित कहिल्यै गरिनन् ।
अहिले सोच्दा उनी छविसँग जान्छु, सिनेमा इन्डस्ट्रीमा काम गर्छु, खुड्किलो मार्छु, त्यसपछि कुनै वेला छाडिदिन्छु भन्ने योजनासहित आएकी रहेछिन्जस्तो लाग्छ । आफ्नो घरलाई आफ्नो नसम्झिएपछि यस्ताखालका प्रश्न दिमागमा आउँदा रहेछन् ।
एउटै बेडमा सुत्थ्यौँ, तर बोलचाल हुँदैनथ्यो
हामीबीच खटपट भएपछि दुई वर्ष त बोलचालै भएन । एउटै बेडमा तीन महिना सुत्यौँ, तर एकअर्कासित बोल्दैन्थ्यौँ । मनभित्रैबाट पीडा भयो भने मान्छे बोल्दो रहेनछ । त्यसपछि उनले कोठा नै चेन्ज गरिन् । र, ६ महिना छुट्टै कोठामा बसिन् । यो मान्छे मेरो होइन, मेरो हुनै सक्दैन भन्ने लागेपछि सेक्सको चाहना पनि हुँदो रहेनछ । उनलाई के भयो थाहा भएन, मलाईचाहिँ सेक्सको चाहना नै भएन ।
उनले मेरो घरलाई आफ्नो घर सम्झिनन् भन्ने गुनासो मात्रै हो मेरो । अब रेखा र मेरो ठूलो ग्याप भो, अब जोडिन सम्भवै छैन । यो सोच्नु पनि मेरो गल्ती हुन्छ । रेखाको म राम्रो शुभचिन्तक हुँ, ऊ मेरो राम्रो साथी हो । उसले जे भन्छे, उसका लागि म जहिल्यै जे काम गर्न पनि तयार छु । अब श्रीमान्-श्रीमती हुनचाहिँ गाह्रो छ । अब म बिहे नै गर्दिनँ ।
संसारमा मान्छे एक्लै जन्मिन्छ, एक्लै मर्छ । सबैले आफ्नो लागि सोच्ने हो, रेखाले जे सोचिन्, राम्रो गरिन् । उनले मलाई तल पार्न खोजिन् भने म तल पर्न पनि तयार छु । जहिले पनि परिरहेको छु नि, मलाई के फरक पर्छ र ? मलाई थिचेर उनी माथि पुग्छिन् भने पुगून् ।
उनले जहिले-जहिले छवि ओझालाई खोज्छिन्, तब तब छवि ओझा आउँछ । तर, म आफैंचाहिँ रेखालाई बोलाउँदिनँ । रेखाको सहारा कहिल्यै खोज्ने छैन । रेखाले जहिले बोलाउँछिन्, म उपस्थित हुन्छु । रेखालाई जब जब अप्ठ्यारो पर्छ, म अगाडि उभिदिन्छु । उसलाई अप्ठ्यारो पर्ने काम म कुनै पनि गर्दिनँ । रेखाको भलो चाहन्छु ।
एक किसिमले म ठूलो प्रेमी नै हुँ । अहिले पनि रेखालाई माया गर्छु । एकदम माया गर्छु, भयंकर माया गर्छु रेखालाई । मैले जीवनमा सबैभन्दा बढी माया गरेकै रेखा थापालाई हो । अहिले पनि म त्यति नै माया गर्छु । रेखा थापा ठूलो भएको हेर्न चाहन्छु ।
ऊ सुखी होस् संसारमा, कहिल्यै दुःख नपाओस् । राम्रो मान्छेसँग हिँडोस्, ऊ माथि उठोस्, जसलाई फिल्ममा मैले ल्याएको हुँ । मेरी श्रीमती थिई हिजोका दिनमा । त्यो गौरव गर्न पाए पुग्छ मलाई ।
एक्लै भएको छु
अहिले घरमा म एक्लै बस्छु । काम गर्ने केटो थियो, आठ महिनाअघि बिहे गर्न गएको, फर्केन । राति १० बजे घर पुग्छु, बिहान ९ बजे मात्रै उठ्छु । घरमा एउटा कुकुर छ, उठेपछि त्यसलाई खाना खुवाएर निस्किहाल्छु । सँगै भएर छुट्दायाद आउँथ्यो, तर यो मेरो होइन भनेर बिस्तारै त्याग्दै गएपछि याद नआउँदो रहेछ ।
बुबा ०४१ सालमै बित्नुभयो, फुत्त जान्थेँ अनि आमालाई भेटेर हिँडिहाल्थेँ । आमासँग २० वर्षयता टीका लगाएको थिइनँ, पोहोर साल गएर टीका लगाएँ । परिवारसँग पनि म टाढा छु । आज न मसँग परिवार छ, न छोराछोरी छन्, न श्रीमती नै । म एक्लै भएको छु ।
म राम्रो छोरा हुन सकिनँ, राम्रो बाउ हुन सकिनँ, राम्रो श्रीमान् पनि हुन सकिनँ । तर, सिनेमा इन्डस्ट्रीको भने वाह भएँ । मैले सबै कुरा सिनेमालाई नै सम्झन्थेँ । सिनेमाबाहेक अन्य पेसा नै छैन । उठेदेखि नसुतेसम्म म सिनेमाकै बारेमा सोच्छु । सिनेमा नै हेर्छु, सिनेमा नै खान्छु र सिनेमामै बस्छु ।
म छोराहरूसँग बसेर रक्सी खान्छु । जेठो छोरा घर आउँछ र ‘ड्याडी आज रक्सी खाऔँ भन्छ । दुवैजना सँगै बसेर खान्छौँ अनि भयंकर गफ गर्छौँ । कान्छो छोरासँग पनि त्यस्तै छ । ऊसँग गर्लफ्रेन्डका कुरासम्म हुन्छ । बाउको जिन्दगी आफ्नो हो भन्छ ।
छोराहरूबाट म पीडित छैन । उनीहरू राम्रो छोरा भइदिए, तर म राम्रो बाउ बन्नै सकिनँ । पैसा दिनु मात्रै जिम्मेवारी होइन, उनीहरूको पालनपोषण मैले गरिनँ । तर पनि, उनीहरूले मेरो बाउ फटाहा हो भन्नेचाहिँ सोचेका छन् जस्तो मलाई लाग्दैन ।
रेखालाई सुझाब : बिहे गर
हामीसँगै हुँदा एकअर्कामा पावर थियौँ, आज त्यो पावर टुटेको छ । यस्तो वेला संयम भएर हिँड्नुपर्छ । रेखाले कन्ट्रोभर्सीमा आउने धेरै काम नगरे हुन्थ्यो । अब मै हुँ भन्ने घमन्ड छाडेर सबैसँग मिलेर जानुपर्छ । किनभने, एउटा कलाकारको आयु १० वर्षको हुन्छ, १० वर्ष बितिसक्यो रेखा थापाको । अब बिस्तारै डाउन हुने टाइम आउँदै छ ।
सधैँ एकनासको करिअर हुँदैन नि, त्यसलाई निरन्तर चलाउन अब सबैसँग मिलेर जानुपर्छ । मोटी न मोटी देखिन थालेकी छ, एक्सरसाइज गर्नुपर्‍यो । राम्राराम्रा चलचित्र खेल्दै जानुपर्‍यो । राम्रो काम गर्दै अघि बढ्नुपर्‍यो । कन्ट्रोभर्सीमा धेरै आए फाइदा हुँदैन । धेरै दुश्मनी कमाउनुहुँदैन ।
रिस भयंकर छ उनको । तुरुन्तै एक्सनमा आइहाल्छिन् र फोनमा गालीमै उत्रने गर्छिन् । यी सब कुराले उनलाई नेगेटिभ बनाउँछ । सबैसँग दुश्मनी गरेपछि कोचाहिँ पोजेटिभ हुन्छ ?
उदाएको सूर्यलाई सबैले नमस्ते गर्छ, अस्ताएको सूर्यलाई आजसम्म कसैले नमस्ते गरेको देखेको छैन । त्यसैले सधैँ मुनिबाट नै उदाउने कोसिस गर्नुपर्छ । आफू झुक्नैपर्छ ।
जिन्दगी लामो छ, रेखाले अब आफूले खोजेजस्तो केटासँग बिहे गरे राम्रो । मैले छुट्ने वेला पनि रेखालाई भनेथेँ, अब राम्रो केटा खोज, बिहे गर । बरु ल्याउनु, म राम्रो कुरा गरिदिउँला । पार्टीमा रिसेप्सनमा बसिदिउँला, बरु कार्डमै लेख न, मेरो कारणले रेखालाई कहीँ पनि नराम्रो हुँदैन ।
( बैसाख ३ गते बजारमा आउने मिरर न्यूज मासिकबाट )
EuropeNepal.Net: छवि ओझा भन्छन्- रेखाले बच्चा पाउन मान्दै मानिनन्